China Elastic umlilo engatywinwanga mveliso kunye nabenzi | Weicheng
Igama lemveliso Elastic itywina engangenwa
Izinto eziluncedo Product Icandelo elinye, elinobhetyebhetye kunye nokubambelela, ukwenza ubume benethiwekhi emva kokutshiswa ngomlilo; inokuthintela ngokufanelekileyo idangatye kunye nokudluliswa kobushushu; nekudodobalisa idangatye kakuhle, ulwakhiwo lula
Ububanzi besicelo 1. Ukutywinwa komphezulu wezikhewu zomgangatho ophambukayo, udonga lokubamba eludongeni, imibhobho yoomatshini, imibhobho yokungenisa umoya, imibhobho yokugqumeza ngobushushu, njlnjl. indibaniselwano phakathi komphezulu wodonga nomgangatho; 3. Ukubonakaliswa Umthungo wokudibanisa phantsi kobushushu obuphezulu uneemfuno ezingqongqo zokutywinwa kothintelo lomsi; Ukutywinwa komdwebo wesakhelo somnyango
Ukufakwa kokudityaniswa kwendlu yokutywina kunye neemfuno ezingqongqo zokuthintela umsi. Uhlobo lolwandiso lwesitywina sokukhusela umlilo, ukuze ufumane isiphumo sokukhusela umlilo, sebenzisa ubukhulu obumiselweyo ukumisela ukuba itywina linxibelelana nomphezulu wesiseko sombhobho ukufumana eyona nto inamandla. Imastic engaphezulu, ngaphambi kokuba iqine, inokususwa ngamanzi. I-elasticity fireproof sealant, coca ukuvulwa, kwaye ulungiselele ukufaka indawo edibeneyo ye-FS-I kufuneka isuswe inkunkuma, uthuli, amabala eoyile, iqabaka, i-wax, njl., Kwaye ihlale yomile. Elinye icandelo, elisekwe emanzini, i-acrylic acid ubungqina bokuba ngumlilo ngumsebenzi ophakamileyo kunye nokunwebeka kwetywina lokubola. Iyakwazi ukumelana nobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu. Iyakwazi ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ubushushu obusezantsi, ubuninzi obuphezulu, ubungakanani, uxinzelelo oluphantsi kunye noxinzelelo olubi, kunye nesantya esiphezulu. Itywina elinye lecandelo elinye, elingahlanganisiyo, elibomvu, elimnyama, itywina elimnyama, aliqinisi kwiqondo lobushushu begumbi kwaye lipapasha kubushushu obuphezulu Itywina lokudibanisa ilangatye luhlobo olutsha lwecandelo elinye lesitywina somlilo. Kwiminyaka yakutshanje, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zophuhliso lokwakha itekhnoloji yokonga umbane, ngokudityaniswa kunye neenzuzo zeemveliso zasekhaya nezangaphandle, yenziwe ngezinto eziphezulu zeemolekyuli.
Ngokubanzi, indlela ethe nkqo isetyenziselwa ukuchonga, eyahlulahlula ibe yi-FV-0, Fv-1 kunye ne-Fv-2 ngokwesiphumo sovavanyo ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Isetyenziselwa ukutywinwa kwamakhethini eludongeni isakhiwo esingacimiyo, kwaye ifuna ukubanakho kokuchasana nokushenxiswa kokufuduka kunye nomlilo kunye nokuthintela umsi, i-Acrylic acid-proof sealant iyahambelana nodidi lwemipu. Uhlobo lokulinganisa uphawu lobungqina bomlilo luhlobo lwezinto zokutywina zeplastikhi zokufaka uphawu, ezinokusebenza ngokutywina kunye nobungqina bomlilo, kwaye kufanelekile kulwakhiwo lobungqina bomlilo. Umda wolwakhiwo uquka imibhobho yesinyithi, imibhobho efudumeza ubushushu kunye namalungu okwakha. Imicu yokuncamathela esetyenzisiweyo kwiingcango ezinobungqina bomlilo zesitywina sokuqina somlilo azinakho ukuhlangabezana neemfuno zobungqina bomlilo, jonga ngokubonakalayo ukuba akukho ndawo incinci imhlophe yezinto ezingatshiyo kwimicu yerabha. Ukuba usebenzisa i-lighter ukuyikhanyisa, yintoni engaphezulu, awufaki nje ii-strant seal, ezichaphazela kakubi ukuthintela umlilo kunye nomsebenzi wokwahlula umsi weengcango zomlilo zentsimbi.
Okulandelayo: Intsimbi yokubamba umlilo ebalekayo